China Laminated Non kpara akpa / Non kpara Shopping Bag / Cute reusable Shopping Bag Manufacturer and Supplier | Zhihongda
Laminated Non kpara akpa / Non kpara Shopping Bag / Cute reusable Shopping Bag
Akpa ndị a na-emeghị akpa bụ akpa ejiri akwa polypropylene (PP) na-enweghị akwa. A na-eji akwa polypropylene na-eme ka akwa a, nke dị nro, dị nro na ikuku.
Ihe a na-eme ka akpa ndị na-enweghị akwa na-adịgide adịgide, na-adọrọ adọrọ, na-eku ume, na-eweghachi, na-eguzogide mmiri, hypoallergenic, na-eguzogide ọkụ, dị nro, ọkụ, na mgbe ụfọdụ ị ga-amị. Ihe maka akpa ndị a siri ike ruo afọ ise.
1. Akpa ndị na-enweghị akpa bụ akpa si na akwa polypropylene (PP) na-enweghị akwa. A na-eji akwa polypropylene na-eme ka akwa a, nke dị nro, dị nro na ikuku.
2.Ihe a na-eme ka akpa ndị na-enweghị akwa na-adịgide adịgide, na-adọrọ adọrọ, ume ume, na-eweghachi, na-eguzogide mmiri, hypoallergenic, na-eguzogide ọkụ, dị nro, ọkụ, na mgbe ụfọdụ ị ga-amị. Ihe maka akpa ndị a siri ike ruo afọ ise.
3.na-adị mfe e biri ebi na a ụlọ ọrụ logo na advertisement; akpa ndị a na-abụghị ndị a kpara akpa bụ ezigbo ngwá ọrụ na njirimara ụlọ ọrụ ma na-adọrọ mmasị dị ka onyinye.
Aha ngwaahịa Hot n'ire omenala logo ebi akwụkwọ laminated na-abụghị kpara tote akpa
Nke gara aga: E Bipụtara Recyclable ịzụ ahịa akpa, Pink Shopping n'ogige atụrụ Tote eyi Laminated Non kpara akpa
Osote: Omenala logo ebipụta ụlọ ahịa na eco reusable green shopping tote Non kpara akpa
Ahaziri eco-enyi na enyi biri ebi ọcha pp abụghị wo ...
Large reusable emefu nri Tote na-abụghị kpara sh ...
China Laminated Foldable Beige Non kpara Shoppi ...
Eco Enyi na Enyi Product N'ogbe Recyclable Custo ...